Ogaden News Agency (ONA) – Shirkii uu soo qaban-qaabiyay Abraha Wolde ujeedadii laga lahaa iyo dhamaadkiisa
Shirkii uu soo qaban-qaabiyay Abraha Wolde ujeedadii laga lahaa iyo dhamaadkiisa
Wuxuu caalamka si fiican u ogaaday inuu ka dambeeyay jeneraalka fadhiya Harar Abraha Wolde burburinta wadahadalkii ay dawladda Kenya martigalisay ee u dhexeeyay xukuumadda Itobiya iyo JWXO. Baadhitaano kala duwan ayaa socda oo la doonayo in lagu ogaado ujeedada ka dambaysa iyo mawqifka dawladda Itobiya ee ku aadan arimaha wadahadalka iyo xal u helidda qadiyadda Ogadenya. Qorshaha uu dajiyay Abraha Wolde ee la doonayo inuu fuliyo Cabdi iley oo maslaxadiisa ay ku xidhan tahay ayaa ka koobnaa qodobo loogu talagalay in lagu fahamsiiyo dawladda dhexe ee Itobiya in Cabdi iley uu hirgaliyay qorshihii uu dajiyay KT Meles Zanawi 2007dii oo ka koobnaa in ONLF laga sifeeyo gudaha iyo dibadaba laba sano gudaheed, kuna guulaystay.
Waxaa ka soo wareegatay shan sano qorshihii sidaa ahaa oo KT. Meles zanawi uu caalamka ugu sheegay inuu ONLF kula dagaalami doono ciidan, siyaasad iyo warfaafin/dacaayad, mudda koobanna uu ku soo fajari doono. Waxaa loo qoondeeyay miisaaniyad xoogan, waxaana loo fasaxay ciidanka iyo sirdoonka Itobiya inay gubaan dhulka iyo waxa ku nool (Scourged earth policy). Siyaasadii noocaa ahayn laguma guulaysan. Natiijada dhabta ah ee laga gaadhay qorshihii la dajiyay 2007dii ee la doonayo in la qariyo oo dacaayad aan jirin lagu marin habaabiyo caalamka waxay noqotay;
1-Dad badan oo shacab ah oo lagu laayay Ogadenya, qaar badanna ay ugu jiraan Itobiya xabsiyada.
2-Caalamka oo ka warhelay dhibaatada shacabka soo gaadhay iyo xad-gudubka xuquuqul insaanka ee ka socda Itobiya guud ahaan.
3-ONLF oo ciidan ahaan iyo siyaasad ahaanba xoog leh oo kharashkii ay ku bixisay Itobiya la dagaalanka jabhadda iyo natiijada ay ka heshay uusan dhanayn 10%.
4-Abraha Wolde iyo Cabdi iley iyo Shifero iyo qaar kale oo ka mid ah saraakiisha sare ee sirdoonka iyo siyaasadda Itobiya oo been aan jirin ka gudbin jiray xaaladda Ogadenya iyo ONLF, sidaana lacag malaayiin doolar ah ku lunsadey.
Masuuliin badan oo ka tirsan dawladda dhexe ee Itobiya ayaa la socday arimahaa, hasa ahaatee aan ka hadli jirin intuu noolaa Meles Zanawi oo sida lagu yaqaano Kali-taliyayaasha aan jeclayn in runta looga sheego wuxuusan rabin. Waxay heleen fursad markii lagala wareegay xukunka TPLF inqilaabkii aan dhiiga ku daadan ee saxaafadda mucaaradka ay ku tilmaameen inuu ahaa mucjiso ee ka dhacay Adisababa. Markuu isku dayay R/wasaaraha cusub Mr. Hailemariam Dessalegn inuu arintaa wax ka qabto oo ugu horeyn uu meesha ka qaado Cabdi iley si silsiladaa beenta iyo dacaayadda ku dhisan iyo laynta shacabka un ay meesha uga baxaan, waxay qaadeen kooxdaasi dagaal rogaal celin ah oo ka kooban qorshaha uu dajiyay Abraha Wolde ee ka socda hadda Jigjiga qaybtiisii 1aad.
Waxyaaba badan oo qosol leh ayaa laga soo sheegayaa shirka loogu yeedhay odayaasha dhaqanka iyo naafadii Ogadenya joogta iyo qaar ka mid ah fanaaniinta la kiraysto. Waxaa ka mid ah arimaha naga soo gaadhaya dadka meesha fadhiya qaar ka mid ah in shalay uu Cabdi ilay ka hadlay shirkii oo ereyo aad loo dhibsaday ay ka mid ahaayeen hadaladiisa. Waxyaabaha kalee aad loola yaabay waxaa ka mid ahaa dad lasoo diyariyey oo la yidhi iska oohiya oo diiday oo mar uu canaantay ku yidhi iiga baxa shirka, taasoo muujinaysaa inuu Cabdi ilay aad u weerarsan yahay.
Sababaha loo soo ururiyay dadka naafada ah ama loo leeyahay iska oohiya waxaa loola jeedaa inay iskala mid dhigaan gabdhaha ku jira xeryaha qaxootiga ama jooga gudaha Ogadenya een ilmada joojin karin marka ay xasuustaan dhibkii loo gaystay ee ciidamada Itobiya iyo maxaysatada Cabdi iley ay faraxumeeyeen.
Waxay kaloo noo sheegeen inuu ku tilmaamay gobalada Dhagaxbuur iyo Qabridahar ama Qoraxay inay yihiin meelaha ONLF ay ka soo burqato taasoo ay ku tilmaameen dadka noo waramay inuu kaga hortagayo cabsi iyo walwal uu ka qabo inay odayaasha ka socda goboladaa runta ka sheegaan shirka, taasoo kaliftay in odayadii aanay niskii danbe imanin intoodii badnayd.
Intaa ka dib, waxyaabaha ay qoreen shabakadaha hoos ahaan ula socda arimaha shirka (Akhri faallo.com ) waxaa ka mid ah in Salaaddiinta, Ugaasyada, caaqiliinta iyo Hoggaamiye dhaqameedyada Deegaanka Soomaalida ay baaq soo saareen ku muujiyeen walaac xaaladaha siyaasadeed, tan bulshe iyo tan dhaqaalee ee maanta uu ku suganyahay deegaanku.
Arimahaasoo idil markaad fiiriso waxaa kuu soo baxaysa inay Itobiya gashay marxalad mugdi ah oo koox sidii gofanihii ugu naaxay dhiigga shacabka aanay doonaynin in xal nabadeed oo waara laga gaadho qadiyadda Ogadenya, xalkaasoo ku imanaya oo kali ah wadahadal aan ahayn mid been iyo brobagaanda loola dan leeyhay.